3 Best Trips Day By Train From Budapest | Save A Train
Home > Travel Europe > 3 Best Trips Day By Train From Budapest
Noho izany dia efa nanao izany farany. Napetrakao ho an'ny fialantsasatrao any am-piasana, Nividy tapakila ny fiaramanidina ka nitodi-doha ho an'i Hongria ho tsara mendrika fety. Ary raha izay no Raharaha tsara ihany no tsara – sady koa anie, Budapest dia tanàna tsara tarehy – aza amidy ny tenanao ihany no fohy amin'ny alalan'ny mifikitra manodidina ny renivohitra. Eoropa dia tsara fifandraisana amin'ny kaontinanta an'arivony safidy ho an'ny fiaran-dalamby mandeha, ary izany dia ahitana ny Hongria. Koa ianao indray mandeha nahita ny Szechenyi mafana Baths ary tiany ny pint amin'ny Beer Spa, mitodi-doha amin'ny tanàna ao amin'ny anankiray amin'ireo 3 andro tsara indrindra Budapest fitsangatsanganana lamasinina.
Ny tanàna lehibe indrindra faharoa ao Hongria, ary fantatra koa amin'ny hoe renivohitry ny Lehibe Hongroà Plain, ity tanàna feno olona tao Jerosalema no an-trano ho 200,000 olona. Manan-tantara sy tsara tarehy, Debrecen fotsiny 2 ora sy 15 minitra avy any Budapest lamasinina. Ny manodidina mahatonga izany tsara dia tsara ho an'ny Budapest kandidà andro fitsangatsanganana lamasinina.
Ny Fiangonana ao amin'ny Debrecen Lehibe ny tanàna ny teboka ifantohany, sy ny anjara asa maha-famantarana ny Protestanta any Hongria. Misy ihany koa ny tranombakoka maro ho anao hitsidika, toy ny Deri Museum, izay ity tranon'ny sasany amin'ireo tapa manan-tantara indrindra amin'ny rehetra Hongria.
Aza adino ny hanandrana avy ny sasany amin'ireo sakafo an-toerana sy ny divay, ihany koa. Raha toa ianao tena sommelier, dia mety hifidy ny “Bikaner”, an-toerana ny vokatra divay izay midika ho “vantotr'ombilahy ran'ny”. Izany dia midika hoe novokarina tany Hongria, ao ny malaza 'Valley tsara tarehy Vehivavy' faritra. Yum!
Raha toa ianao mpankafy ny mafana fandroana, Debrecen koa dia efa anao voasarona. Ao amin'ny fomban-drazana lasa avy, ny Aquaticum Spa dia toy ny anaty trano rano park. Manasongadina avo domed valin-drihana sy ny loko rano tsary, ireo fandroana mafana ireo dia mahafinaritra ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
2. Best Budapest Day By Train Trips: Vienna, Aotrisy
Fa izao teny manaraka ny andro Budapest nivezivezy lamasinina, isika dia mandao tanteraka sy Hongria hizotra ho any Aotrisy, Andrefan'i Hongria namana. Ny renivohitr'i Aotrisy, Vienna dia tsara tarehy tanàna sy trano ho over 2 tapitrisa mponina. Toy ny ankamaroan'ny Hongria, Vienna lainga ihany koa eny an-Danube. Tsy toy ny tanàna kely, na izany aza, Feno hipoka Vienna feno faritra samy hafa, tranombakoka, attractions, sy ny karazana sakafo.
Fantatra ho toy ny foiben'ny ny kolontsaina sy ny zavakanto, izy io koa dia manao spaoro fisehoana kafe miroborobo ary hahita kafe an-jatony eny amin'ireo arabe mihodinkodina izy ireo. Vienna an-trano ihany koa ny Schonbrunn, ny fonenan'ny fahavaratra any Hapsburgs ary iray amin'ireo tranobe marobe manerana ny tanàna.
Raha mandeha ianao ao amin'ny ririnina, Vienna dia tsy maintsy-mijanona noho ny Noely tsena. Ireo fantastical tsena ireo herin'ny maizina na inona na inona fohy ny amin'ny jiro mamirapiratra no fahitana izany Fairy, mafana mulled divay, fampiononana sy ny mafana ny sakafo.
Na dia lava ny dia iray andro avy any Budapest lavitra amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, misy mafy tsy miato safidy azo amin'ny safidy. Tsara kokoa, ianao mba hijery hahazo iray hafa firenena Eoropeana eny ny bucket list.
Budapest any Vienne Lamasinina
3. Best Budapest Day By Train Trips: Wiener Neustadt, Aotrisy
Farany, dia efa tonga ny farany teny, ny tapaky ny tanàna salantsalany faritra atsimon'i Vienne. Eny, marina izany, dia efa nanampy Aotrisy iray hafa andro nankany lisitra ity. Nahoana ny fa? Tsara satria Wiener Neustadt (ankoatra ny manana mahatsikaiky anarana), dia feno olona tao Jerosalema tanàna efa ho 50,000 olona, ary mahazo azy io amin'ny lafiny zavatra hatao.
Any 30km monja avy any Vienne sy tena akaikin'ny sisin-tanin'i Aotrisy Hongroà-dia ny tonga lafatra ny andro Budapest fitsangatsanganana lamasinina, ity tanàna ity ny tantara Mihabetsaka amin'ny ady ho an'ny fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana isan-karazany. Na dia eo aza ireo ady- na angamba noho ny aminy – Wiener Neustadt dia niova ho toerana fanofanana miaramila lehibe tamin'ny fananganana ny Akademia Miaramila Maria Theresa tamin'ny taona 1700.
Mandao ny lasa ho any aoriana, amin'izao fotoana izao dia an-trano Wiener Neustadt ny hetsika isan-karazany maro, anisan'izany ny tongotra lavitra be ny ivelan'ny trano sy ny valan-javaboary. Azonao atao ny mitsidika Myra Falls ho an'ny sasany mahafinaritra tongotra lavitra, na ny loha tsy mahazo manao Gesaeuse National Park maka rivotra madio.
Ny tanàna maro koa ny tsangambato, tranombakoka, ary nanolo-tena ho nampiasa ohatra momba ny lalan-tsara tao an-tanàna ny tantara. Raha izany feo rehetra tia loatra ho anareo – aza manahy. Taorian'ny iray andro ny asa loha tsy mahazo manao amin'ny Linsberg Asia Therme Spa ho an'ny fahafahana ho tony (na manafana ny!) ary miala sasatra.
Budapest ho Wiener Neustadt
Vienna ho Wiener Neustadt
Prague ho Wiener Neustadt
Ny capital Czech dia somary lavitra loatra ho Budapest andro fitsangatsanganana lamasinina fa io vohitra io dia tsy mba ho hita. Izany hoe raha tianao ny tantara, maritrano, sakafo, sy ny zava-pisotro. Na dia ny efa ho 8 ora lamasinina avy any Budapest, raha toa ianao izany loha fa hevitra tsara ny mandeha amin'ny alalan'ny Vienne (fantatrao, fa mahatahotra tanàna voalaza etsy ambony isika).
Amin'ny ankapobeny lafo sy feno trano taloha, fanta-kianja niaro Moyen Âge, sy izao tontolo izao ny tranainy indrindra fandidiana Takelaka Momba ny Kintana Clock, Prague dia tsy maintsy atao amin'ny-vakansy Eoropa. Raiso mora eto ary finaritra Nitsangantsangana manerana ny Charles Bridge, vita tamin'ny 1402. Na tsara kokoa, anaovy ny fanamianao mpanjaka tsara indrindra ary mankanesa any Vysehrad mandritra ny andro hijerena ireo rava taloha tamin'ny lapa taloha.
Budapest andro nivezivezy lamasinina sy Budapest dia tanàna mahafinaritra ny fitsidihana. Avy ny tsara tarehy boulevards ho amin'ny malaza mafana fandroana, ny tanàna dia tsy misy ny tara. Fa manao ny tenanao ho famindram-po ary mitodi-doha avy rehetra indraindray mba hijery ny sasany amin'ireo herin'ny maizina ao an-toerana bebe kokoa ho anao. Na ianao sipping sasany ny ran'ny vantotr'ombilahy divay na minia ho any amin'ny firenena vaovao tanteraka, jereo ny zavatra hita eo amin'ny vakansy.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaovana Budapest andro fitsangatsanganana lamasinina – mankafy ny tsy hanahirana sy ny fiarovana ny mandeha lamasinina sy ny fampiasana Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “3 Best Budapest Day By Train Trips” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-budapest-day-trips-train%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / andehilahy ny / de na / en sy ny maro hafa fiteny.